Boqolkiiba 68 ee Kenyaanka oo dowladda ku ammaanay la tacaalidda cudurka Covid-19 – Radio Damal
Boqolkiiba 68 ee Kenyaanka oo dowladda ku ammaanay la tacaalidda cudurka Covid-19
Darasaad ay sameeysay shirkadda cilmi baarista ee Infotrak ayaa lagu ogaaday in boqolkiiba 68 ee Kenyaanka la wareystay ay u riyaaqeen waxqabadka dowladda ee ku aaddan la dagaalanka cudurka Covid-19 .
Kenyaanka ayaa badankoodu sheegay inay ku kalsoonyihiin tallaabooyinka dowladda ay ku xakameynayso faafitaanka fayraska.
Hasa ahaate boqolkiiba 50 ee dadka cilmi baaristan lagu wareystay ayaa dareemaya in musuqmaasuqa , xarumaha daryeelka caafimaad oo gaabad ah iyo Kenyaanka oo fududaysta amarrada dowladda ay caqabad ku noqon karaan dadaallada jira.
Boqolkiiba 45 ee shacabka waxay doonayaan in wax laga qabto cunno yarida halka boqolkiiba 35 ay dowladda ka dalbanayaan inay xal u hesho shaqa la’aanta si dadweynaha ay noloshooda u maareeyaan xilligan uu jiro cudurka sii faafaya.
Sido kale in badan oo dadka darasaadka ka qeyb qaatay ka mid ah ayaa sheegaya in dib u furka goobaha lagu caweeyo , maqaayadaha , dadka qaar oo ka caga jiidaya in la baaro, booliska oo arxaan darro ku kaco iyo takoorka dadka uu fayraska saameeyay ay dhibaatooyin dheeraad ah ka dhalan karaan.
Shacabka ku nool gobollada dalka ee bariga, bartmaha, Nairobi , galbeedka, xeebta iyo waqooyi bari ayaa sheegaya inay xaaladda ku sii adkaan karto hadii caabuqa corona uu sii jiro.